Sida Loo Ogaado Waxyaabaha Cetilistat (Cetislim) Powder For Dhimirka Miisaanka
Sida Loo Ogaado Waxyaabaha Cetilistat (Cetislim) Powder For Dhimirka Miisaanka
/blog/cetilistat/Sida Loo Ogaado Waxyaabaha Cetilistat (Cetislim) Powder For Dhimirka Miisaanka
Posted on 04 / 17 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray cetilistat.
Wax kasta oo ku saabsan budada Cetilistat
1.Waa maxay budada Cetilistat
2.Cetilistat budada cayriin Calaamadaha aasaasiga ah
3. Daawada budada Cetilistat waxtar leh
4.Cetilistat budada waxay isticmaashaa
5.Waa maxay Qiyaasta iyo Wareegyada loogu talagalay budada Cetilistat?
6.Waa maxay dhibaatooyinka soo raaca budada Cetilistat?
7. Muxuu yahay xakamaynta budada Cetilistat ee xakamaynta cufan?
8. Budada Cetilistat runtii miisaanka beyli kartaa?
9. Sidee buu budada Cetilistat uga caawinayaa miisaanka?
10.Muxuu isticmaalaa budada Cetilistat si loo daaweeyo cayilka?
12.Waa maxay tahay inaad u sheegto dhakhtarkaaga intaadan qaadan budada Cetilistat?
13.Cetilistat Fududooyin Cabbitaan iyo digniino
14.How si aad u xajisid budada Cetilistat ee casriga afka 60mg?
15.Waa maxay farqi udubyada Orlistat iyo Cetilistat?
16.Waa maxay Qorshaha Horumarinta Wajiga III ee budada Cetilistat?
17. Su'aalo Faa'iido ah oo ku saabsan budada Cetilistat
Cetilistat (Oblean) video budada ah
I.Cetilistat (Qalabka) Calaamadaha aasaasiga ah ee budada:
Name: Cetilistat (Foosto) budo ah
Qaaciddada Molecular: C25H39NO3
Miisaanka kelli: 316.31
Dhibcaha Biyaha: 190-200 ° C
Color: Powder Gray
1. Waa maxay budada Cetilistat?
Dufanka Cetilistat waa walxo cayriin ah budada Cetilistat, oo loo yaqaano Cetislim, had iyo jeer waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo miisaanka luminta, daaweeyo cayilka. kaas oo ah budada cad CAS No. 282526-98-1.
2. Budada Cetilistat Calaamadaha aasaasiga ah:
Name: Budada Cetilistat, cetislim
Miisaanka kelli: 401.58
Dhibcaha Biyaha: 72.0 ilaa 76.0 ° C
Kaydinta Nabadgelyada: 2-8 ℃
Budada budada Cetilistat Color: Caddaan cad ama midab cad
3. Daawada budada Cetilistat waxtar ma leh?
Waxtarka caafimaad iyo badbaadada budada Cetilistat waxaa lagu soo bandhigay taxane tijaabooyin Wajiga II ah. Tijaabinta wejiga IIb ee bukaan-socodka ee 612 bukaan-socod eegtada bukaan-socodka ah ayaa muujisay in muddo 12 toddobaad ah oo daaweyn ah, budada Cetilistat 80mg iyo 120mg waxay kor u qaadday miisaanka oo aad u lumay marka la barbar dhigo placebo (3.85kg iyo 4.32kg iyo 2.86kg siday u kala horreeyaan), sidaas awgeed waxay la kulmeen aasaaska tijaabada dhamaadka.
Uma dhaqmayso habka dhexe ee dareenka;
La dagaallanka cayilka;
Cunto ma cunin;
Waxay ka caawisaa dhimista miisaanka iyo horumarinta isugeynta jirka;
Ma keeno isbedel niyadda sida walaaca iyo dareenka;
Isticmaalka waxaa bixiya ANVISA.
4. Cuntilistat budada ayaa isticmaala
Daawada Cetilistat (Cetislim) waa daawo ka hortag ah oo ka hortaga miisaanka oo kaa caawinaysa dhiirigelinta miisaanka luminta iyadoo la xakameynayo enzyme oo loo yaqaan lipase pancreatic. Enzyme-ga ayaa qarsoodi ku ah beeryarada waxaana caadi ahaan la sameeyaa gudaha mindhicirka halkaas oo ay ka caawiso inay burburiso baruurta iyo triglycerides. Marka laga hortago waxqabadka of enzyme this, hidrolysis ee triglycerides (noocyada dufanka xun) ayaa qayb ahaan ka hortagga. Tani waxay keenaysaa in si weyn hoos loogu dhigo astaamaha dufanka xaydhka ah iyo dufanka lagu nuugo jirka, gaar ahaan marka cuntada la cuno ka dib.
Dufanka kasta ee aan la karinin waa mid aan awoodin in la nuugo loona beddelo jidhka sida saxarada. Daaweyntu waxay caawin kartaa in la yareeyo dufanka dareeraha iyo jirka culus, si kastaba ha ahaatee, bukaanku waa in ay ogaadaan in isticmaalka daaweynta lagu daaweeyo baahida cayilka ah ee la socota diirinta, jimicsiga iyo isbeddelada kale ee hab nololeedka. Tani waxay gacan ka geysaneysaa yaraynta halista ah in la horumariyo cudurrada daba dheeraatay ee la xariira in ay miisaanka sareeyo, sida nooca sonkorowga 2.
5. Waa maxay Qiyaasta iyo Wareegyada loogu talagalay budada Cetilistat?
Qiyaasta kiniinka loo yaqaan "Cetilistat" ayaa loo bixiyaa xajmiga awoodda 60mg ee afka laga qaato. Daawada waxaa la qaataa cuntooyinka si loo hubiyo in ay shaqeyn karto inta cuntada la miiro, si ay u nuugto dufanka cuntadu ka timaaddo si wax ku ool ah. Dhakhtarkaaga ayaa kugula talin doona inta daawo qaadashada qiyaas kasta, iyo sidoo kale qiyaasta loo baahan yahay maalin kasta. Aad bay muhiim u tahay in aad adeecdo tilmaamahan. Ha qaadan wax ka badan dhakhtarkaaga oo kuu sheegaya inaad qaadato.
6. Maxay yihiin dhibaatooyinka soo raaca budada Cetilistat?
Bukaan-socodka daaweynta buurnideedka leh Cetislim (budada Cetilistat) budada ayaa laga yaabaa inay waxyeello soo gaarto. Waa inaad u sheegtaa dhakhtarkaaga haddii ay tani dhacdo. Qaar ka mid ah tusaalooyinka halkan ayaa la bixiyaa
Ku fadhiiso dheecaan
Cillad la'aanta saxarada
Dammaanad joogto ah
Inkasta oo falcelinta khafiifka ah guud ahaan loo tixgeliyo in ay noqdaan kuwo caadi ah, dhacdooyinka halista ah ee ba'an ayaa sidoo kale dhici kara. La tasho dhakhtarkaaga isla markiiba haddii ay taasi dhacdo.
Xakamaynta budada Cetilistat ee dareeraha nadiifka ah ee acetone, isopropanol, acetonitrile iyo biyaha ayaa si tijaabo ah loo go'aamiyay iyadoo la adeegsanayo habka isu dheelitirka kala-soocida isothermal ee heerkulka u dhexeeya (278.15 ilaa 323.15) K oo ku hoos jira cadaadiska hawo ee 101.1 kPa. Heerkulka joogtada ah, isku-darka jajabka jajabka ee budada ceeriin ee Cetilistat ayaa ka weynaa acetone marka loo eego saddexda kale ee dareeraha nadiifka ah. Waxay u kala baxeen sidii acetone> isopropanol> acetonitrile> biyo. Soodhaweynta la helay waxay kuxirantahay isla'egta Apelblat. Qiimaha ugu weyn ee celceliska weecasho celcelis ahaan wuxuu ahaa 0.86 × 10− 2, iyo isweydaarsiga celceliska-celceliska, 15.55 × 10 Furthermore 4. Intaas waxaa sii dheer, xuduudaha xallinta mudnaanta (δx1,3) ee budada Cetilistat ee isku-darka isku-darka acetone , Qiimayaasha δx1 waxay ku kala duwan yihiin si aan toos ahayn oo leh iskudhafka (2) saamiga dhammaan isku dhafka biyaha. Halbeegga xallinta doorbidaa wuxuu ku liito isku-darka biyo-hodanka ah laakiin wuxuu ku fiicnaa isku-dhafka dhexdhexaadka ah iyo isku-darka isku-dhafan-wadaagga Xaaladda dambe, waxay ahayd wax la qiyaasi karo in budada Cetilistat ay u shaqeyneysay sidii Lewis acid oo ay la socoto maaddooyinka isku-dhafka ah. Tallaabada wadajirka ah waxay la xiriiri kartaa jabinta qaabdhismeedka amar ee biyaha hareeraha qulqulka budada ceeriin Cetilistat taasoo kordhisay xalka daroogada. Xogta xallinta iyo daraasadda ku-meel-gaadhka ah ee thermodynamic waxay ballaarisay macluumaadka fiisikiska kiimikada ah ee ku saabsan budada Cetilistat ee isku-darka isku-dhafka binary, kaas oo looga baahnaa warshadaha dawooyinka iyo kiimikada si loo badbaadiyo waqti iyo lacag si loo helo hagaajinta xallinta iyo / ama naqshadeynta hannaanka daweynta.
Daraasado dhowr ah ayaa sheegaya in kiniiniga budada ah ee Cetilistat uu ka shaqeynayo in uu joojiyo nuugista baruurta. Saameynteeda waxaa lagu falanqeynayaa inta badan xaddiga dufanka joogtada ah ee saxarada dadka daaweynaya daroogada.
Daraasad lagu daabacay wargeyska Britishka ee Pharmacology, ayaa mutadawiciin ah oo daaweyn la leh budada Cetilistat waxay muujiyeen inay kor u kici doonaan baruurta saxarada marka loo eego kooxda oo aysan qaadan dawada. Daraasad la mid ah ayaa lagu soo gabagabeeyay in daaweynta budada Cetilistat ay wax ku ool u tahay in laga hortago in la nuugo dufanka xiidmaha ee mawduucyada caafimaadka leh ee hela cunto la kontoroolay.
Dhibaatooyinka caafimaadka ee ay sameeyeen takhaatiirta Japan Takeda, oo ka shaqeeya budada Cetilistat ayaa muujisay in dadka daawada loo qaatay daawooyinka loogu talagalay daroogooyinka 12 ay ka culus yihiin kooxda kooxda kantaroolka oo qaata kiniinada kaliya.
Daraasadda bukaanada 612 ee bukaanka, kooxdu waxay qaadatay budada Cetilistat qiyaasta 120 mg kg 4: 32 ayaa lumay celcelis ahaan, halka kooxda la siiyay 80 mg Cetilistat ceyriin qashinka 3.85. Kooxda xakamaynta, oo keli ah lacagtii lumay 2.86 ee toddobaadkii XNUM.
Taasi waa, miisaanka lumay ugu yaraan 25% ka badan oo kooxo ah oo isticmaalaya budada Cetilistat marka loo eego kooxdu waxay hayaan cunto isku mid ah balse aan helin daawada.
Budada Cetilistat waa a miisaanka lumay miisaanka loo isticmaalay isku-darka cuntada kaloriinta yar. Waxay ku shaqeysaa iyadoo laga horjoogsanayo qadar badan oo dufan ah in la shiido oo la nuugo jirka. Budadan miisaanka luminta waxaa lagu sifeeyay inay tahay lipase inhibitor waxayna si toos ah ugu shaqeysaa nidaamka dheef-shiidka halkaasoo ay ka xireyso ficilka enzyme lipolytic loo yaqaan lipase. Labiskani waa waxa jidhku u isticmaalo in uu ku shiido baruurta.Si kastaba ha noqotee, markii daawadan la qaato iyada oo ay weheliso cuntada, waxay ku xidhan tahay baruurta, taas oo ka celinaysa inay jabiyaan baruurta. Dufanka aan hydrolyzed-ka ahayn ayaa saxarada laga saarayaa, taas oo keeneysa dheecaanka dufanka saxarada oo kordha iyo dhuuqida dufanka oo yaraada. Markii loo isticmaalo wadajirka cuntada kaloriinta ee dhimaysa, waxay kaa caawin kartaa hagaajinta miisaanka oo yaraada oo u fududeeya bukaanada miisaanka culus inay qaab ahaan dib ugu soo noqdaan, taas oo kor u qaadaysa fursadaha miisaanka oo luma Isticmaalkeedu wuxuu la mid yahay budo ah oo ka weyn ama liiska iyadoo la xakameynayo lipase pancreatic.
10. Sidee loo isticmaalaa budada Cetilistat si loogu daaweeyo buurnaanta?
Kordhinta sii kordhaysa ee buurnaanta ayaa dhiirrigelisay raadinta mukhaadaraadka si loogu daaweeyo xaaladdan. Istaraatiijiyooyin kala duwan oo la daweynayo ayaa la sameeyay, oo ay ku jiraan:
Serotonin iyo daaweynta nadaafada jirka ee noradrenaline (Walxaha anorectic)
Cudurka daacuunka ee Endocannabinoid
Dufanka Cetilistat waa lipase inhibitor, oo leh hab la mid ah tallaabada Roche ee dawada ka hortagga cayilka ah ama listat (Xenical®) kaas oo helay oggolaansho sharci ah ee 1997. Daawooyinkani waxay ku dhaqmaan habka dheefshiidka caloosha si loo joojiyo lipases, enzyms ku lug leh burburka dufanka cuntooyinka. Iyada oo la xakameynayo burburinta iyo nacaybka xiga ee dufanka ka yimaada mindhicirka, lipase inhibitorku wuxuu yareeyaa dufanka iyo calories, sidaas darteed caawinta miisaanka luminta.
Ha joojin qaadashada dawada si kadis ah, haddii uusan dhakhtarku ku farrin. Joojinta daawada si lama filaan ah waxay sababi kartaa in uu cudurku soo noqdo.
Iska ilaali isticmaalka khamriga maadaama laga yaabo inay bedesho nuugista
Daawada ka ilaali meel aanay carruurtu gaarin.
Waxaa lagula talinayaa in aadan qaadan budada Cetilistat haddii
waxay dhaaftay taariikhda dhicitaanka ee daawada lagu daabacay baakadka.
shumiska ama baakadaha waa la jeexay ama waxay muujinaysaa calaamadaha fara-gelinta ama xummad.
12. Maxaad u sheegi kartaa dhakhtarkaaga intaadan qaadan budada Cetilistat?
U sheeg dhakhtarka haddii aad leedahay wax xasaasiyad ah oo xasaasiyad leh oo leh isticmaalka
U sheeg dhakhtarkaaga haddii aad uur leedahay inta aad qaadaneysid budada Cetilistat.
U sheeg dhakhtarka haddii aad qaadato dawooyin kale, dawooyinka OTC, daawooyinka dhirta ama nafaqada
13. Taxaddarrada budada Cetilistat iyo digniinta
Laguma talinayo in la qaato kabadan 3 ka badan saacadaha 24.
Isla markiiba u gudub waaxda caafimaadka ee kuugu dhow haddii aad qabto xasaasiyad xasaasiyadeed. Astaamaha sida caadiga ah ee la xariira dareen-celinta noocan oo kale ah waxaa ka mid ah neefsashada ama liqidda, feeraha dhakhli, barar, finan maqaarka, iyo finan.
Cetislim mar walba maahan mid ku haboon dhammaan bukaanada. Had iyo jeer la tasho bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga ka hor intaadan isticmaalin daawadan haddii aad uur leedahay, naas nuujineysid, iskuday inaad uur qaaddo, isticmaasho daawooyin kale (dawooyinka rijeetada ama rijeetada aan dawo lahayn), adoo isticmaalaya wax kasta oo geedo ah ama dheeri ah, ama haddii aad qabto xasaasiyad ama caafimaad kale dhibaatooyinka.
Qiyaasta saxda ah ee budada Cetilistat iyo rijeetada ayaa badanaa ku xiran bukaanka iyo xaaladda la daaweynayo. Ha hagaajin daawadaada adigoon haysan ogolaanshaha bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga. Waxyaalahaas ayaa kaliya loogu talagalay isticmaalka sida loo qorey lana faray.
14. Sidee loola heshiiyaa budada "Cetilistat" oo looxa kabuubyo 60mg?
Cuntilistat Powder Receipes Caanaha:
02 # qalab qabsasho qalab ah 100mg / capsule budada Cetilistat 150g
Qiyaasta budada ah ee budada: 60mg / qiyaasta
100mg / capsule-Cetilistat budada cayriin 60mg / qiyaasta = 40mg
Budada Cetilistat 60mg / qiyaas: 40mg / dufan burun baradho = 3: 2
150g Cetilistat budada cayriin: 150mg budada starch miro = 3: 2
250,000mg ÷ 100mg / capsule = 2500capsules (budada Cetilistat)
15. Waa maxay faraqa udubka Orlistat iyo Cetilistat?
Duufaanta Cetilistat, Lipase-Nitrifin-gaas-nacabeedka cusub, waxay u muuqataa in ay tahay mid wax ku ool ah maaraynta buurnaanta iyo asluubteeda sida lipase-ka-qabe kale, ama liiska, iyada oo muujinaysa dulqaad wanaagsan, iyadoo loo eegayo labo waji 2 oo la kala gooyey, indho-indhoole, xakamayn-xakameyn, Daraasad 12 usbuuc.
"Lipase inhibition wuxuu cadeeyay waxtarka bukaanka cayilan iyo bukaanka cayilan ee sonkorowga qaba," ayuu yiri Tom, dean, kuliyada caafimaadka, Jaamacada East Anglia, Norwich, United Kingdom, oo soo bandhigtay labada daraasadood iyagoo matalaya Cetilistat budada ceeriin ee Yurub Ku ururso halkan Shirka 15aad ee Yurub ee Cayilka (ECO).
Daraasadii ugu horreysay waxay baartey isticmaalka budada Cetilistat ee 372 bukaanno cayilan oo leh qiyaasta jirka (BMI)> 30, xarumaha ku yaal Yurub oo dhan. Dhammaan bukaanada waxay heleen latalin degdeg ah oo xagga nafaqada ah intii ay daraasaddu socotey waxayna wada cuneen cunto loo qoondeeyey oo loo qoondeeyey inay ahaato qiyaastii 500 kcals oo ka hooseysa cuntadooda miisaanka-ilaalinaysa. Intaa waxaa dheer, bukaanada waxaa la siiyay 60, 120, ama 240 mg oo ah budada ceeriin ee Cetilistat, ama placebo, waqtiga cuntada, seddex jeer maalintii.
Miisaan culus ayaa lagu gaadhay dhammaan kooxaha daaweynta ee usbuucyada 12, iyada oo hoos loo dhigay miisaanka 3.5-kg ee lagu gaadhay 120 mg budada Cetilistat seddex jeer maalin kasta oo ka soo horjeedda placebo (P <.05).
"Budada Cetilistat waxay wax ku ool u ahayd soo saarista miisaanka oo yaraada 12 toddobaadyo daraasad ah," Dr. Tom ayaa ku yiri soo bandhigid Abriil 23rd. Intaa waxaa dheer, waxaa jiray hoos u dhac weyn oo ku yimid wareegga dhexda. ”
Daraasaddan labaad oo ay soo bandhigeen Dr. Tom, cilmi-baarayaashu waxay ku qoreen maadooyinka 612 ee leh nooca sonkorowga 2, kuwaas oo qaadanayay metformin. Qaar badan oo ka mid ah bukaannada ayaa sidoo kale ku jiray statins, iyo qiyaastii saddexaadna waxay sidoo kale qaadatay daawada antihypertensive.
Sida daraasaddii hore, bukaanjiifku waxay heleen cunto diidmo ah iyo mid ka mid ah saddexda qiyaasood ee kala duwan ee budada Cetilistat (40, 80, ama 120 mg), ama placebo. Waxaa intaa dheer, koox daraasad afaraad ah ayaa loo kala saaray 120 mg oo ka mid ah waqtiyada 3 maalin walba.
Dr. Tom wuxuu sheegay in miisaanka yar ee la dhimay laga helay dhammaan kooxaha daaweynta, oo qiyaastii 35% maadooyinka ku jira qiyaasta budada Cetilistat ee ugu sarreeya helitaanka miisaan lumis ah oo ku saabsan 5% miisaankooda hore ama ka badan. Waxaa intaa dheer, waxaa jiray dhimis guud oo laga jaray glycosylated hemoglobin (HbA1c) toddobaadyo XNUM.
Inkasta oo xogta waxtarka leh ee la barbar dhigi jiray Cetilistat-ka iyo liiska, kala duwanaansho weyn ayaa ka dhex martay labadan daroogo oo ku saabsan noocyada dulqaadka, sida uu sheegay Dr. Tom.
Guud ahaan, bukaanada lagu daweeyey liiska waxay ku dhowaad laba jeer ka badan yihiin dhacdooyin halis ah oo daran - ugu horreyn caloosha - taasoo horseedda joojinta daaweynta marka loo eego tan Kooxaha budada ah ee Cetilistat. Heerka munaasabadaha qatarta ah ee keena joojinta ayaa la barbar dhigi jiray kooxda la socota iyo kuwa qaata budada Cetilistat.
Natiijada natiijooyinkan, Dr. Tom ayaa soo gabagabeeyay in budada cayriin Cetilistat ay leedahay fayow qabad leh oo wanaagsan, waana amaan iyo waxtarka leh ee maareynta buurnaanta iyo astaamahooda.
Maalgelinta daraasaddan waxaa bixiyay Qalabka AASraw Biochemical, soo-saaraha budada Cetilistat.
16. Waa maxay Qorshaha Horumarinta Wajiga III ee Cuntilistat budada budada ah budada?
Cambridge, UK - Maarso 6, 2008 - Alice (LSE: AZM) ayaa maanta ku dhawaaqeysa in FDA ay ogolaatay labada borotokol ee harsan barnaamijkeeda horumarinta Phase III ee budada Cetilistat iyadoo la raacayo habraaca Qiimaynta Gaarka ah ee "(SPA") waxayna ku talisay in Alice la furo sonkorow gaar ah IND.
Budada ceeriin ee Cetilistat waa badeecada dheef-shiid kiimikaadka Alice ee hoosta ka socota ee loogu talagalay daaweynta buurnaanta iyo cudurrada la xiriira ee la xiriira, oo ay ku jiraan nooca sonkorowga 2. Waa xannibaadda lipase-ka caloosha ee xannibaysa dheef-shiidka iyo nuugista dufanka, taasoo horseedaysa qaadashada tamarta oo yaraata, sidaas awgeedna miisaan lumis.
Ka dib markii uu dhammaado guusha dhamaystirka Wajiga II, FDA waxay ogolaatay qorshaha Alice ee qorshaha kobcinta kiliiniga Phase III ee budada Cetilistat. Tani waxay ka kooban tahay 3 daraasaddood oo ah 12 bisha:
(i) bukaanka cayil la'aanta ah ee aan lahayn xanuunka iyo bukaanka cayilan oo la daaweynayo ama aan la daaweynin iskudhafyo (oo aan ahayn nooca sonkorowga 2);
(ii) bukaanka cayil la'aanta ah ee aan lahayn iskudhafyo iyo bukaanka cayilan oo aan la daaweynin iskudhufyo (oo aan ahayn nooca sonkorowga 2); iyo
(iii) bukaanka cayilan ee qaba cudurka macaanka ee 2 iyo kuwa laga yaabo inay daweeyaan ama aan la daaweynin isbitaal kale.
Bishii Abriil 2007, Alice waxay ku dhawaaqday in borotokoolka daraasadda koowaad lagu raacay FDA iyadoo la raacayo nidaamka HBS. Hab-maamuuska daraasadaha labaad iyo saddexaad ayaa hadda sidoo kale lagula heshiiyey FDA iyadoo la raacayo nidaamka HBS. Daraasadda labaad waxay ku lug yeelan doontaa isbarbardhig toos ah Xenical ®, iyo sidoo kale placebo.
FDA ayaa soo bandhigtay hindise qabyo ah oo ku saabsan horumarinta daawooyinka sonkorowga dhammaadka February 2008. Tilmaamahan hoos ku qoran, waxay qiratay in horumarinta HbA1c ay noqotey qiyaasta natiijooyinka heerka cabbirka natiijooyinka diabeteska.
Caddaynta amniga iyo waxtarka budada ceeriin ee Cetilistat ayaa lagu aasaasay iyada oo loo marayo daraasado ballaaran oo Wajiga I iyo Wajiga II ah. Intaa waxaa sii dheer, daraasadaha Wajiga II, Cetilistat budada ceeriin ayaa la muujiyey inay keento miisaan lumis tira ahaan aad u tiro badan, marka la barbar dhigo placebo iyo, bukaan socodka bukaansocodka leh bukaansocodka, si ay u keento dhimis tirakoob aad u weyn HbA1c.
FDA waxay si toos ah ula xiriirtay Alice oo la xiriirta barnaamijkeeda Wajiga III ee la qorsheeyay waxayna ku talisay in Alice ay furato macaan gaar ah IND oo loogu talagalay budada Cetilistat, maadaama aysan hadda u baahnayn in saameynta daroogada ee xakamaynta glycemic ay ka madax bannaan tahay saameynta ay ku leedahay culeyska jirka si daroogada si loogu tixgeliyo calaamadda macaanka oo kaligeed ah. Inkasta oo FDA ay si cad u sheegtay in daraasadaha amniga muddada-dheer ee soconaya in ka badan hal sano loo baahan karo daaweynno qaarkood oo arrimo amni ama su'aalo badani ka soo baxaan, waxay muujisay in daraasadda 12 bilood ay ku filnaan doonto daraasad muhiim ah oo leh budada ceeriin ee Cetilistat loogu talagalay dadka qaba cudurka macaanka.
Barnaamijka horumarinta wajiga III ee budada Cetilistat, oo bixiya waddo cad oo diiwaangalin ah sida sheyga cayilka ah, ayaa hadda diyaar u ah inuu bilaabo dhammaadka heshiis ganacsi. Waxaa sii jiraya xiiso u leh iskaashi iyo kobcinta horumarinta ee budada Cetilistat; wadahadaladu waa socdaan.
Isagoo ka hadleysa go'aanka, Sarkaalka Sare ee Fulinta, Tim McCarthy wuxuu yiri:
Waan ku faraxsanahay warkan. Kaliya maahan dariiqa sharciyeynta ee budada Cetilistat oo ah badeecad cayil badan oo si adag loo aasaasay FDA, iyada oo si cad loogu siinayo la-hawlgalayaasha suurtagalka ah marka loo eego wadada loo marayo suuq-geynta budada ceeriin ee Cetilistat, laakiin waa fursad lagu horumariyo suuqa loogu talagalay budada Cetilistat iyadoo la furayo IND cudurka macaanku muhiimad weyn ayuu u leeyahay ganacsiga. ”
Qiimaynta Gaarka ah ee Gaarka ah (SPA)
Iyadoo ay weheliso dib-u-celinta Xeerka Isticmaalka Macaamiilka Isticmaalka Daroogada ee 1992 (PDUFA) bishii Nofeembar 1997, FDA waxay ogolaatay ujeedooyinka waxqabadka gaarka ah ee qiimeynta iyo heshiiska khaaska ah. Hadafyadani waxay ku siinayaan, marka la codsado, FDA waxay qiimeyn doontaa qawaaniinta qaarkood (sida hababka kansarka, hababka xasiloonida, iyo hababka wajiga 3aad ee tijaabooyinka kiliiniga kuwaas oo sameeyn doona aasaaska aasaasiga ah ee sheegashada waxtarka) si loo qiimeeyo in ay ku filanyihiin in ay la kulmaan farsamooyinka iyo sharciyeynta shuruudaha loo aqoonsaday qofka kafaala qaaday (kiiskan Alice).
Markii ay FDA iyo kafaala-qaadaha ku-meel-gaadhka ah, oo hoos yimaad Qiimaynta Khaaska ah ee Gaarka ah, Hay'addu waxay caddaynaysaa in qorsheynta iyo qorsheynta qorshaynta daraasaddu ay si hufan u wajahayso ujeedooyinka taageeridda soo gudbinta qawaaniinta.
Sida ku xusan yoolalka PDUFA ee Qiimaynta Khaaska ah ee Gaarka ah, iyada oo la isku raacay naqshadaynta, fulinta, iyo falanqaynta soo jeedinta nidaamka loo marayo nidaamkan, Hay'addu dib dambe uma beddeli doonto aragti ku saabsan arrimaha naqshadaynta, fulinta, ama falanqaynta mooyaane welwel aan loo aqoonsan xilliga qiyaasta qiyaasta ee nidaamkan ayaa caddaynaya.
Cetilistat budada cayriin
Badeecada dheef-shiid kiimikaadka ee Alice, budada Cetilistat, waxaa loo soo saaray daaweynta buurnaanta iyo cudurada la xiriira cudurada (oo ay ku jiraan nooca sonkorowga 2). Waa ka hortage dheef-shiid kiimikaad xannibma oo xannibaya dheef-shiid kiimikaadka iyo nuugista, taasoo horseedaysa qaadashada tamarta oo yaraata, sidaas awgeedna miisaanka oo yaraada. Way ka duwan tahay inta badan wakiilada kale ee ka hortagga buurnida maadaama aysan ku dhaqmin maskaxda si loo yareeyo rabitaanka cuntada, laakiin waxay u dhaqmeysaa si muuqaal ah. Xaruntu waxay ku sii jirtaa mareenka caloosha iyo dheefshiidka oo aan lahayn nuugista jirka. Sidaa darteed, waxaa laga fili karaa inay lahaato heer sare oo faa'iido-faa'iido u leh daroogada bartamaha ka hawlgasha. Iyadoo la raacayo, budada ceeriin ee Cetilistat kuma xirna welwelka amniga ee guud ahaan la xiriira daroogooyinka waxqabadka u leh bartamaha.
Roche 's Xenical waa shey buurnida la oggol yahay oo sidoo kale laf-dhabarta u ah ka-hortagga lipase-ka. Si kastaba ha noqotee, tijaabooyinka bukaan-socodka, budada Cetilistat ayaa loo muujiyey inay si aad ah uga sii dulqaadasho badan tahay Xenical oo leh waxyeelo saameyn xun ku leh u hoggaansanaanta bukaanka.
17. Su'aalaha badanaa la weydiiyo Cetilistat budada ceeriin budada ah
A. Ma ammaan tahay beddelka qiyaasta budada Cetilistat?
Maya, laguma talin karo in wax laga beddelo qiyaasta loo qoray. La tasho dhakhtarkaaga wixii su'aalo ah ee la xiriira qiyaasta.
B. Miyuu caadi u yahay in uu la kulmo baqshiinka budada Cetilistat?
Haa, sinnaantu waa saameynta daawada Cetilistat. Si kastaba ha ahaatee, la tasho dhakhtarkaaga.
C. Ma daaweyn karaa daawadan dadka kale?
Laguma talin karo inaad daawooyinka kugula taliso dadka kale sida darnaanta xaaladda iyo taariikhda caafimaad ma aha mid la mid ah qof kasta.
Tags: iibso budada Cetilistat, Dufanka Cetilistat, Alaab-bixiyeyaasha budada ah ee cetilistat
Biyo budada VS Cetilistat budada
Halkeen ka iibsan karaa budada finasteride tayo sare leh	Dufanka enchancing: Daawada Vardenafil HCL VS Avanafil
AASraw waxay soo rari kartaa cayriin steroid saafi ah oo leh shixnad badbaado leh. Ku soo dhawow si aad nala soo xiriirto dhawaan!